Ny amin’ny Chat Roulette Manerana izao Tontolo izao ity Bilaogy Ity Fitsipika
Dia nampiasaina mba ho fa te mba hihaona ny olona manerana izao tontolo izao dia tsy maintsy miala ny fitombenana, ny hahazo pasipaoro sy ny dia lavitra. Amin’izao fotoana izao? Inona ny milay, ataovy fotsiny amin’ny sasany hafahafa akanjo na ny haka azy ireo eny, tonga tao amin’ny Chat Roulette ary jereo ny zavatra maneran-tany weirdoes afaka hihaona. Ny hevitra ho an’ny toerana ity dia avy amin’ny teny rosiana, fa amin’izao fotoana izao amin’ny Chat Roulette manerana izao tontolo izao manana bebe kokoa ANAY ary zavatra mpampiasa noho ny avy amin’ny firenena hafa. Na izany aza, dia afaka mahita ny zavatra mahagaga sy mahafinaritra ny olona avy na aiza na aiza eto an-tany sy any an-dafin’ny. Tsy afaka Hiresaka Roulette fitaterana ianao manerana izao tontolo izao ny toa mety ihany koa ny fitaterana anareo indray mandeha ny fotoana. Eto isika dia afaka mahita ny tsy mampino ny sary ny olona avy amin’ny Nazi mihazakazaka Alemaina any ny mampifandray ny toerana ny alalan ‘ ny fotoana milina.
Ny frantsay dia voalaza ho lehibe ny mpampiasa ny amin’ny Chat Roulette. Raha ny marina, manana vintana ho afa-mifandray amin’ny olona iray avy ao Frantsa, izay faharoa ihany ny vintana hahazo olona avy any ETAZONIA (akaiky ny fahafahana). Tsy mazava loatra hoe inona ny mety tsy dia mahazo mpijery ny amin’ny olona iray avy amin’ny galaksia lavitra, lavitra any, fa ny vintana ny olona roa avy any fivoriana na ny tsirairay dia tsy maintsy ho tsara tarehy slim. Obama Bin Laden tahaka ny fampiasana ny amin’ny Chat Roulette betsaka, mandeha araka ny isan’ny sary azy izay manodidina. Na izany aza, indraindray dia bumped ao mihitsy ratsy olona iray amin’ny fotoana ratsy. Na dia vahiny te ho namana vaovao amin’ny Chat Roulette manerana izao tontolo izao amin’ny fotoana. Raha ny marina, manana ahiahy tsokosoko fa mety ho izao, ny miala aina, ny homo sapiens ao niakanjo vahiny akanjo.
Ny mpampiasa hafa tsy toa ka resy lahatra ny amin ‘ izany, na
Ahoana no mety ho fihetsiky raha ny firenena no nandrahona ny amin’ny Chat Roulette amin’ny alalan’ny Teny. Izany angamba ny prank ahoana anefa no azonao antoka? Mety ho tsara indrindra ny manao izay lazainy fotsiny ny raharaha. Tsy manana hevitra izay firenena ireny olona ireny fa ny ankizivavy toa avy any amin’ny toerana izay misy ny fomban-drazana ny fanaovana kiraro eo ny lohany mba hampisehoana fa tena te-zavatra. Raha ho avy ny mpahay tantara miezaka ny miasa avy izay tany am-boalohany st taonjato ny olona dia tahaka ny mampiasa afa-tsy amin’ny Chat Roulette sary izy ireo no handeha ho lasa somary hafahafa ny sary ny izao tontolo izao. Ny tarehimarika farany dia milaza fa ny fahatelo ny toerana tapitrisa ary ny antsasaky ny mpampiasa dia avy any ETAZONIA.
Na izany aza, ny isan’ny olona mampifandray avy Laponie tsy fantatra
Izy no tena Santa mampifandray avy tany, dia tsy izy? Izany dia mafy toy izany na fa ny volombava no sandoka na tsia. Tsy manana hevitra izay bandy ity dia avy na ny antony hafa indray dia tezitra toy izany. Fa ny hatsaran-tarehy ny toerana ity fotsiny ianao tsy mahalala izay ao amin’izao tontolo izao ianao dia hiafara
← Afaka hiresaka online
Maimaim-poana ny mampiaraka toerana →